Kodzero-dzevanhu, 01 Kukadzi 2019
Chishanu 1 Kukadzi 2019
Ndira 31, 2019
Vashandi veHurumende Vopesana Matanho Avari Kutora
Musangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council maita kusawirirana kunotyisa vamwe vachiti kuramwa mabasa ngakutange asi vamwe vachiti vanofanira kupa hurumende nguva uye zvinhu hazvina kugadzikana parizvino.
Ndira 30, 2019
VaAmos Chibaya veMDC Vanosungwa Zvakare Vachipomerwa Mhosva Yekuda kuPidigura Hurumende
Gweta raVaChibaya, VaReginald Chidavanyika vanoti VaChibaya vakasungwa vachangobudiswa mujeri reHwahwa mushure mekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva yavari kupomerwa yekuronga mhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri adarika.
Vabereki Vochema Chema neKukwidzwa kweMari yeZvikoro
Vabereki vakawanda vari kuchema chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro muMasvingo mushure mekunge hurumende yazvipa mvumo.
Vamwe Vofarira Mabhazi eZUPCO kwaMutare Asi veMakombi Vachigunun'una
Vamwe vegari vekwaMutare vanoti vari kufara zvikuru nekuuya kwemabhazi eZUPCO muguta mavo vachiti vemakombi vainge voita madiro aJojina vachivabhadharisa mari dzakawanda zvikuru.
Hurumende Yokundikana Kuwirirana neVashandi paMari Dzavanotambira
Munyori mukuru musangano reApex Concil, mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende VaDavid Dzatsunga vanoti mushure memusangano wemaawa mana vatadza kuwirirana nyaya yemari dzavanotambiriswa nehurumende.
Vakarohwa neMauto neMapurisa Votadza Kurapwa neZvikonzero Zvakasiyana Siyana
Vamwe vevanhu vakarohwa nekushungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja vanoti havasati vanyatsowana kurapwa kwakakwana.
Ndira 27, 2019
Hurumende Inoshevedzera Musangano weKuedza Kumisa Kuramwa Mabasa kweVashandi
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi, reApex Council, Amai Cecilia Alexander, vanoti vakokwa nehurumende kuti vasangane neMuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekunge dzimwe nhaurirano dzavakamboita dzatadza kuburitsa chimuko.
Ndira 25, 2019
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muAmerica Zvoratidzira paMuzinda weNyika
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kuungana mangwanani ano pamuzinda weZimbabwe uri muWashington D.C., zvichiratidzira zvichinyunyuta nemabatirwo azvinoti ari kuitwa vanhu kumusha nehurumende.
Dare Rinoudza Hurumende Kuti Iripe Vagari Vari kuArda Transau
Vagari vekuARDA Transau vari kufara zvikuru zvichitevera mutongo wapihwa nedare repamusoro kwaMutare wokuti mhuri dzinodarika mazana masere dziripwe kutamiswa kwadzakaitiswa makore akati kuti apfuura.
Sangano reYoung Journalists Association Ronyunyuta neKurohwa kweNhengo Yaro neMapurisa
VaMnangagwa Vanoramba Hurongwa hweveMakereke hweKumbosendeka Sarudzo
Musungwa Anoshaya Zvichitevera Kushungurudzwa Kwaanonzi Akaitwa neMapurisa
SADC Yokurudzira Nhengo Dzayo Kutora Matanho paNyaya yeZvirango zveZimbabwe
Veruzhinji Vanoti Bhiri reZimbabwe Media Commission Rinopa Masimba Akawandisa kuGurukota